Akwụkwọ Stefanie Siclot na Martech Zone |
Edemede site na Stefanie Siclot
Stefanie Siclot bụ akụkụ nke SEO otu na Ugwu Rocket, ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ nke dabeere na Los Angeles. Ọ na-ahụ maka ịbawanye ogo na ọnụọgụ nke weebụsaịtị yana nke na-atọ ya ụtọ.
Ibe ọdịda bụ otu n'ime ntọala ndị ga - enyere ndị ahịa gị aka ịnyagharịa na njem ndị ahịa ha. Ma gịnị kpọmkwem ka ọ bụ? Karịsịa, olee otu ọ ga - esi mee ka azụmahịa gị baa uru? Iji mee nkenke, e mepụtara peeji ọdịda dị irè iji mee ka ndị ahịa nwee ike ịme ihe. Nke a nwere ike ịbụ ịdenye aha na listi email, denye aha maka mmemme na-abịanụ, ma ọ bụ zụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Ọ bụ ezie na ihe mgbaru ọsọ mbụ nwere ike ịdị iche,